Honor 6 Plus, ny tsy nampoizina indrindra tamin'ny MWC | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Huawei, MWC, About us, hevitra
Huawei dia manana lanjany betsaka eo amin'ny tsena aziatika na dia mbola tsy nanomboka aza ny tany Eropa. Noho io antony io, volana vitsivitsy lasa izay dia nanolotra ny marika Honor vaovao ny mpanamboatra, mifantoka mazava tsara amin'ny tsena eropeana sy ny Honor 6 Plus ho faneva lehibe.
Ary saina inona! Tamin'ny fotoana miresaka momba ity fitaovana ity izahay, miaraka amin'ny vidiny manintona manodidina ny 350 euro. Ankehitriny izahay dia nanakaiky ny booth Huawei tao anatin'ny MWC mba hitsapana azy ary ny fahatsapana dia tsy ho tsara kokoa.
1 Volavola mahafinaritra
2 Ny fitaovan'ny Honor 6 Plus dia tsy misy tokony hialona ny mpifaninana aminy
3 Honor 6 Plus fakan-tsary, hanala ny satrokao
6 Tombontsoa sy fatiantoka ny Honor 6 Plus
Ilay mpanamboatra sinoa dia manana tsena vaovao hanafika ary fantany fa mitaky be ny mpampiasa eoropeanina ka nanao ezaka be ny dfamolavolana sy kalitaon'ny famaranana ny Honor 6 Plus, izay tsy nety ho tsara kokoa.
Ary io no asa fiasa lehibe an'ny Honor dia amboarina manodidina ny chassis misy fefy vy ary misy a bezel anoloana sy aoriana ao anaty vera mora tezitra hery lehibe. Ny touch dia mahafinaritra ary ny terminal dia toa fitaovana premium. A 10 amin'ity lafiny ity.
Ny fitaovan'ny Honor 6 Plus dia tsy misy tokony hialona ny mpifaninana aminy
Raha ny endrika famolavolana sy ny fanamboarana ampiasaina ao amin'ny Honor 6 Plus no tena manana ny toerany, dia tsy dia taraiky lavitra ny fitaovana entin'ity sainan-dehibe ity. Ary azy ve izany Efijery IPS 5.5 santimetatra ary ny vahaolana feno HD dia toa tsara ampiasaina.
Ny Honor 6 Plus mikapoka fisaorana a Huawei HiSilicon Kirin 925T SoC, Sora nanometera 28 sy fotony valo amin'ny maritrano kely (efatra Cortex-A15 amin'ny 1.8 GHz ary efatra Cortex-A7 amin'ny 1.3 GHz). Ny ARM Mali-T628MP4 GPU miaraka amin'ny RAM 3 GB dia manome fahombiazana mahatalanjona, manao izay hampandeha tsara ny terminal hatrany amin'ny fotoana rehetra.
Ary tsy afaka manadino momba izany isika 32 GB ny fitehirizana anatiny azo velarina amin'ny alàlan'ny slot misy azy microSD hatramin'ny 128GB. Ny antsipiriany mahaliana dia ny hoe Honor 6 Plus dia Dual SIM ary ny iray amin'ireo slot dia azo ampiasaina amin'ny SIM faharoa na ho an'ny karatra fahatsiarovana. Teboka iray hafa ho an'ny Huawei sy ny Honor 6 Plus amin'ny fahalalana ny fomba hanatsarana ny habaka tahaka ny azo atao. Amin'ilay fitaovana.
La Bateria 3.600 mAh Miaraka amin'ny haitao SmartPower 2.5 mampifandray ny Honor 6 Plus, manana fahaleovan-tena ampy hahafahan'ny terminal miaritra andro sarotra amin'ny ady tsy misy olana. Raha ny fifandraisana, ny Honor 6 Plus dia manana fanohanana ny tambajotra LTE, NFC, Bluetooth 4.1 ary WiFi.
Ny hany tokana fa mety ho hitantsika dia ny kinovan'ny lozisialy Google ampiasaina. Ary io ilay Honor 6 Plus mikapoka fisaorana Android 4.4 KitKat, na dia eo ambanin'ny sosona Emotion UI 3.0 aza, customization iray Huawei izay mampiditra mpitantana lohahevitra feno, ary koa madio sy intuitive.
Honor 6 Plus fakan-tsary, hanala ny satrokao
Manambony tena ny voninahitra rehefa tafiditra ao izy fakantsary tsara indrindra eny an-tsena. Tsy fantatro raha marina izany, fa ny sensor 8-megapixel indroa dia natao hahitana hazavana sy fampahalalana betsaka indrindra, mitovy amin'ny fomban'ny HTC's Duo Lens, ary manaitra ny valiny.
Ny fitsapana izay nataontsika niaraka tamin'ny Fakan-tsarimihetsika mahery vaika 6 Plus Nampiaiky volana anay izy ireo. Tsy azo resena ny fifantohany ary ny mety hamerenana indray ny sary raha vantany vao nalaina ny sary dia singa iray tokony hikajiana.
Amin'ny ampahany dia manampy ny azy izany flash LED indroa izany dia hahafahanao maka sary an-tsarimihetsika amina toerana tsy dia misy jiro. Ary ireo tovolahy avy amin'ny Honor dia tsy nanadino ireo olona tia tena amin'ny alàlan'ny fampidirana fakan-tsary 8 megapixel eo aloha.
Amin'izao fotoana izao dia misy eo amin'ny tsena ny Honor 6 Plus. Na dia mbola tsy nanambara tamim-pomba ofisialy ny fahatongavan'ity fitaovana ity tany Eropa aza i Huawei, azonao atao ny mikaroka an'i Amazon hahitanao fa efa misy tahiry amin'ity fitaovana ity. Ny vidiny? 350 euro, varotra tena izy mandinika ireo toetra ara-teknika sy famaranana ny Honor 6 Plus.
Tombontsoa sy fatiantoka ny Honor 6 Plus
Tsy tantera-drano izy io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 6 plus, famolavolana tena tsara ary iray amin'ireo fakantsary tsara indrindra eny an-tsena
Pablo alonso dia hoy izy:
Raha te hanome ahy ianao dia avelako ny tenako eh ...
Valiny tamin'i Pablo Alonso
Salama Pablo Alonso,
manamarika ny fangatahanao izahay. Mampalahelo fa andiana rajako misy loha telo no nangalatra ny fandefasana farany ny Honor 6 Plus, saingy mampanantena izahay fa raha hainay ny mahazo azy dia ho anao ilay iray maloto maloto.
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny hevitrao!
JaUme PraTs dia hoy izy:
Joan Hortet Piera mandeha "pepinaco"! jereo ny fakantsary ary jereo ny preu! ^^
Mamaly an'i JaUme PraTs
DanNGouki dia hoy izy:
Raha afaka nametraka slot micro SD roa ho an'ny chips i Huawei satria nalain'i Samsung ny micro SD avy amin'ny S6. Zavatra tsy afaka ao an-tsaiko io.
Mamaly an'i DaNGouki